Dagaal culus ayaa ku dhexmaray ciidamada jubbaland,AMISOM iyo al-shabaab duleedka kismaayo – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeyay ciidamada Maamulka Jubbaland oo taageero ka helaya kuwa AMISOM ee ka socda Itoobiya iyo Al-Shabaab uu ku dhex maray duleedka waqooyi ee Kismaayo.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay markii ciidamada Itoobiya ay madaafiic ku garaaceen deegaanka Buulo Gaduud, Yoontoy iyo Cabdala Biroole oo ah deegaano ku dhow Kismaayo.
Wararka ayaa intaa ku daraya in duqeynta kadib uu iska hor imaad culus labada dhinac ku dhex maray, waxaana hubka la isu adeegsanayay laga maqlayay qeybo ka mid ah magaalada Kismaayo.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya inay arkeen gawaari sida dhaawacyada ciidamada Jubbaland la keenay magaalada, waxaana si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalkaas.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jubbaland ay xalay dib ugu laabteen agagaarka Kismaayo, halkaasoo saldhig ay ku leeyihiin.
Maamulka Jubbaland ayaa dhowaan sheegay inuu qaadi doono howl gal ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana soconayay dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen Ciidamo ka socda Itoobiya oo dhowaan gaaray Kismaayo.